> Resource > Android > nidaameed Xiriirada ka Outlook in Nexus 5 Si fudud
Waxaan doondoonayaa hab si hagaagsan xiriirada aan ka Outlook in aan Nexus 5, laakiin ma aan helin hab "automatic", oo keliya kala iibsiga buuga ka Outlook in file CSV in Gmail. Markaasuu u hagaagsan xiriirada aan Gmail la telefoonka. Si kastaba ha ahaatee, waa buugga iyo meel sida ugu Google waxay maamushaa in ay ku milmaan magacyada xiriirada aan 'iyo koob oo ay weheliyaan, sidaas darteed kaliya horyaal (aan magacyadooda) muujiyaan in aan xiriiro ee Gmail (oo sidaas daraaddeed telefoonka).
Sida loo hagaagsan Microsoft Outlook la Google Nexus 5
Si aad u hagaagsan xiriirada ka Outlook in Nexus 5, waxaa laga yaabaa in sidoo kale aad u qaadan sidii aan toos ahayn sida user kor ku yaal aanu. Si kastaba ha ahaatee, run ahaantii aanad u leeyihiin in ay sameeyaan in. Halkii, waxaad samayn kartaa effortlessly marka aad qabto tababare xirfad Android, sida Wondershare MobileGo for Android (Windows).
Waxaa si gaar ah loogu tala galay caawinta aad maamuli wax kasta oo aad Nexus 5. Waxa uu awood u leeyahay in la ogaado oo lagu wareejiyo dhammaan xiriirada aad Outlook Express iyo Muuqaalka 2003/2007/2010/2013 in aad Nexus 5 aan ku xirid ah. Intaa waxaa dheer, iyadoo aan loo eegayn haddii aad leedahay cable USB ah ama aan, waxaa kaa caawin kara inaad dhammayn in. Waxay u egtahay weyn? Waa maxay sababta aan kala soo bixi version maxkamad free of Tababaraha Android? Waxay kuu ogolaanaysaa inaad isticmaasho tababaraha Android si xor ah 15 maalmood.
Tallaabada 1. Isku aad Nexus 5 ilaa PC ka via WiFi / cable USB
Sida aan kor ku soo sheegnay, in aad sidoo kale buuxin karo in cable UBS ah in ay ku xidhmaan aad Nexus 5 ilaa PC ama isticmaal xiriir WiFi. Si aad u isticmaasho WiFi, hal shay waa in aad is illowsiin waa in aad u baahan tahay rakibi app MobileGo taas oo si toos ah u rakiban Nexus 5 via cable USB. Marka la xidhiidha ay tahay guul, aad Nexus 5 kula files ay la soo bandhigi doonaa furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. nidaameed Google Nexus 5 la Muuqaalka
Tag column bidix ee kooxda reer, oo guji Xiriirada . In suuqa kala xiriir ah, guji Import / dhoofinta iyo in waxa la soo daadiyaa liiska, dooran Import xiriirada ka computer. Dhibic kale oo hoos liiska soo baxa, kaas oo waxaad riixi kartaa ka Outlook Express ama ka Outlook 2003/2007/2010/2013 .
Markaas, tababaraha Android bilaabi doonaan in la ogaado oo akhri xiriirada ee account Muuqaalka aad. Ka dibna, waxaad dooran kartaa qeybta xiriir ah si loo badbaadiyo xiriirada Muuqaalka ah, kaadhka xusuusta telefoonka ama kaarka SIM. Ka dib markii in, guji Import si ay u gudbiyaan xiriirada ka Outlook in Nexus 5.
Hadda, xiriirada Outlook ayaa lagu synced aad Nexus 5. Haddii aad hesho nuqul badan oo ku yaal, waxaad riixi kartaa De-nuqul si ay u milmaan. Haddii aad rabto in aad wax ka bedel xiriir ah, kaliya aad u baahan tahay si sax xiriir ah oo guji Edit in xaalkaa info xiriir.
Ka sokow Muuqaalka hagaagsan oo Nexus 5, tababaraha Android sidoo kale waxaad ogolaanaysaa:
Bedelka files ka PC in Nexus 5: Tababaraha Tani Android sidoo kale waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku wareejiso ama badalo file vCard, photos, music, videos iyo barnaamijyadooda si aad Nexus 5.
Kaabta iyo soo celinta Nexus 5: Ma rabtaa inaad xog gurmad on Nexus 5 hor khasaaro xogta shil? Waa wax sahlan. Tababaraha Android waxay ku siinayaan gurmad hal-click iyo soo kabashada.
Import Lugood playlists in Nexus 5: Sidaa daraadeed, waxaad si fudud u dajiyaan karaa oo dhan ama soo xulay playlists in Lugood Library in Nexus 5.
Files ka dhaqaaq Nexus 4 ilaa Nexus 5: Waa maya dhib badan. Connect aad Nexus 4 iyo Nexus 5 ilaa computer, halka socda tababare Android ah. Markaas, guuraan music, videos, xiriirada, iyo files dheeraad ah oo ka soo Nexus 4 ilaa 5 Nexus.
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka iPhone in Nexus 4